Sida codka looga saaro Mac-ga | waxaan ka imid mac
Sida loo saaro codka ka video on Mac
Marka ay timaado in la wadaago fiidiyowga, iyadoo ku xiran waxa ku jira, waxay u badan tahay inaan xiiseyneyno codka ka saar. Waxaan sidoo kale arki karnaa nafteena baahidaas marka aan tafatireyno muuqaal ka yimid Mac si aan ugu darno duubista, muusiga asalka ah ...
Iyadoo aan loo eegin sababta aad rabto ka saar codka muuqaalka Mac, Maqaalkan waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo. Si loo fuliyo nidaamkan, waxaan isticmaali karnaa codsiyada bilaashka ah iyo kuwa lacag bixinta labadaba.
4 Cute gooyo
iMovie, sida aad wada ogtihiin, waa kan app tafatirka fiidiyaha bilaashka ah Apple waxay diyaar u tahay dhammaan isticmaaleyaasha macOS iyo macOS. Waa sida mini Final Cut Pro, Apple ee software tafatirka xirfadeed in ka badan 300 euros.
Iyada oo la adeegsanayo iMovie, kaliya ma abuuri karno fiidiyowyo cajiib ah, anagoo adeegsanayna qaab-dhismeedka, kala-guurka dhammaan noocyada kala duwan, ku ciyaarno asalka cagaarka ama buluugga si loogu beddelo sawirro kale, laakiin sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan codka ka saarno muuqaal kasta.
Haddii aad hore ula soo shaqeysay barnaamijka tafatirka fiidyaha, waxaad awoodi doontaa inaad hubiso sida hawlgalka iMovie waa mid aad la mid ah, oo leh waqtiyo noo ogolaanaya inaan dejino sida ay u kala horreeyaan fiidiyowyada, raadadka maqalka ah ee la shido ...
Fiidiyowyada ku jira codkooda waxaa ka mid ah gudaha, a khad cagaaran oo ina tusinaysa heerka codka jidkaas. Sida caadiga ah, codka waxaa lagu ciyaaraa 100%, taas oo ah, isla mugga la duubay.
Haddii aan rabno inaan hoos u dhigno mugga waa inaan dul saar jiirka xariiqaas oo hoos u dhig ilaa aad ka hesho heerka mugga ku habboon. Laakiin haddii waxa aan rabno in aan si buuxda u tirtirno, waa in aan hoos u dhignaa khadkaas ilaa heerka mugga uu yahay eber.
Marka aan hoos u dhigno mugga fiidiyoowga ama jajabka fiidyaha eber, waa in aan badbaadi mashruuca una dhoofiyaan qaabka aan rabno si aan hadhow u wadaagno.
Haddii waxa aad rabto waa in aad tirtirto codka ee muuqaal ka mid noqon doona qayb kale, uma baahnid inaad si madaxbanaan u tirtirto, maadaama aad ku samayn karto wakhtiga fiidiyahaas, maadaama codadka maqalka ee fiidiyowyada oo dhan ay yihiin kuwo madaxbannaan, taas oo ah, waxaan kor u qaadi karnaa, hoos u dhigi karnaa ama tirtiri karnaa codka hadba baahidayada iyada oo aan la helin. saameynaya inta kale ee fiidiyowyada.
Waad awoodaa soo deji iMovie gabi ahaanba bilaasha ah macOS iyada oo loo marayo isku xirkan.
VLC waa cayaaryahanka ugu wanaagsan ee laga heli karo suuqa, markaan iraahdo kan ugu wanaagsan waxaan ula jeedaa kan ugu fiican, ma aha mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Interface-keeda qadiimiga ah marka laga reebo, VLC waa a ciyaaryahan socon kara mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah qaabab video iyo audio ee suuqa.
Intaa waxaa dheer, waa il furan, marka ma ahan in aan hal euro ku qarash gareyno codsigan si aan u helno dhammaan howlihiisa. Mashruucan waxa lagu hayaa iyadoo lagu salaynayo deeqaha isticmaalayaasha. waxayna diyaar u tahay dhammaan nidaamyada hawlgalka ee aad qiyaasi karto.
VLC ma aha oo kaliya ciyaaryahan muuqaal ah oo cajiib ah, laakiin sidoo kale waxaa ku jira qaar ka mid ah hawlaha dheeraadka ah sida kartida soo dejiso fiidiyowyada YouTube, Isku-dubarid maqal iyo muuqaal (marka kuwani aanay gacmaha is qabsan) iyo xataa suurtogalnimada ka saar codka muuqaalka.
para ka saar codka muuqaalka Codsiga VLC, waa inaan sameynaa tillaabooyinka aan ku tuso hoosta:
Marka aan furno codsiga VLC, waa in aan waxaan xulnaa fiidiyaha kaas oo aan rabno inaan ka saarno codka.
Marka xigta, dhagsii Qalabka - Xulashada.
Qeybta Dookhyada, waxaan aadeynaa Audio. Qeybta hoose ee bidix guji Dhammaan.
Kadib sanduuqa raadinta waxaan ku qoreynaa Daar codka
Tiirka saxda ah, waxaan ka saareynaa sanduuqa U oggolow maqalka.
Ugu dambeyntii, waxaan gujineynaa badhanka Badbaadi isbedelka aan wax ka badalnay.
Codsi kale oo cajiib ah oo gebi ahaanba bilaash ah oo furan oo noo ogolaanaya inaan ka shaqaynta video editing waa Avidemux, codsi suuqa ku jiray dhowr sano oo hubaal ah, inaad maqashay, ugu yaraan kuwa ugu badan ee ruug-cadaaga ah, tan iyo markii si joogto ah loo isticmaalo markii aan dhib ku qabno isku-dhafka maqalka iyo muuqaalka.
Laakin marka lagu daro ogolaanshaha in aan isku dhejino maqalka iyo muuqaalka, codsiga sidoo kale noo ogolaadaa in aan ka saarno track audio ah gabi ahaanba laga soo qaaday muuqaal. Si looga saaro jidka maqalka ah ee fiidiyowga leh Avidemux, waa inaan samaynaa tillaabooyinka aan ku tuso hoosta:
Marka hore, waxaan wadnaa codsiga iyo waxaan furaynaa muuqaalka aan rabno inaan ka saarno codka.
Marka xigta, sadarka bidix, qaybta Wax soo saar maqal ah, ku dhufo liiska hoos u baxa oo dooro ma jiro (midna Ingiriisi).
Ugu dambeyntii, waxaan gujinaa Liiska faylka oo dooro Keydi.
Waad awoodaa soo dejiso Avidex gabi ahaanba bilaasha ah macOS iyada oo loo marayo isku xirkaan
Sida sano ee la soo dhaafay, iMovie ayaa shuruudaha ugu yar ee kordhay Si loogu shaqeeyo macOS oo hadda nooca ugu hooseeya ee la taageeray waa macOS 11.5.1 Big Sur.
Haddii kooxdaada ma socon karo iMovie, oo aad rabto in aad u habayn karto muuqaaladaada qaab fudud, waxaa kuu dheer in aad haysato ikhtiyaarka aad kaga saari karto codka muuqaalada, waa in aad tijaabiso Cute Cut, codsi aanu bilaash ugu soo dejisan karno Mac App Store iyo in kuma jiraan wax iibsi gudaha app ah.
Hawlgalka codsigan wuxuu la mid yahay barnaamijyada kale ee tafatirka fiidiyaha. Waayo ka saar codka muuqaalka, waa in aan ku darnaa wakhtiga iyo, tiirka saxda ah, qaybta codka, hoos u dhig mugga ilaa ugu yar.
Cute gooyo waa socon kara sida OX 10.9, version ah in lagu soo bandhigay suuqa 1999, taas oo ah, waa la jaan qaada Mac kasta tan iyo sanadkaas.
Waxaad awoodi kartaa download Cute Cut gabi ahaanba bilaasha ah macOS iyada oo loo marayo isku xirkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo saaro codka ka video on Mac
wallpapers xeebta ugu fiican ee Mac